Abantu abadala/Abantwana: $9,75
Abantu abadala: $8,75
Abantwana abangaphantsi kweenyanga ezili-12: Mahala
Amalungu eveki ye-CMOW:
Mahala (ngoMvulo-Fri.) kunye ne-1/2 ngaphandle kweempelaveki
CMOW ACM/Nanini na Amalungu: Mahala
Amalungu e-ACM: 1/2 isaphulelo
Isaphulelo somkhosi siyasebenza kumntu ngamnye
amagqala okanye abasebenzi basemkhosini abasebenzayo
ngesazisi somkhosi. Iya kukukhuthaza ukuba ukhethe ukhetho lwamatikiti aqhelekileyo, amatikiti aphezulu okanye ukhetho lwamatikiti omkhosi ekuphumeni.
Ukuba unencwadi yokupasa yethala leencwadi, ukungena simahla okanye imvume yokungena ethotyiweyo, nceda ufowunele kwaye ugcine umnxeba ngexesha lethu lokusebenza.
Sililungu elithatha inxaxheba loMbutho weZiko loLondolozo lweNdalo zaBantwana.
Unabo ubulungu kwenye imyuziyam yabantwana? Amalungu e-ACM anokuthenga amatikiti ngokobuqu ngesiqingatha sexabiso. Bonisa ubungqina bobulungu kwidesika engaphambili xa ufika. Jonga apha ukuze ubone ukuba uyakufanelekela ukufumana isaphulelo se- ACM.
Ukuba uthenga iMyuziyam Kuwo onke amatikiti esaphulelo ngeSNAP okanye ikhadi le-EBT, ungathenga amatikiti akho ngokwakho nge-3 yeedola xa ufika.
Iikhuphoni eziye zaphelelwa ngexesha lokuvalwa kwethu zandiswa iinyanga ezintandathu ukususela kumhla wokuphelelwa kwawo. Sitsalele umnxeba ukuba unayo nayiphi na imibuzo eyongezelelweyo malunga nokwamkelwa okuthotyiweyo.
NgoLwesibini ukuya ngoMgqibelo
1:00 emva kwemini -5:00 emva kwemini
Bhalisela incwadana yethu ezantsi kweli phepha ukuze ungaphoswa luhlaziyo!